Hodges U Akpọrọ 2020 Best For Vets College site na Oge Ndị Agha
Akpọrọ Mahadum Hodges Kachasị Mma Maka etslọ Akwụkwọ Vets site na Oge Ndị Agha maka 2020
Mahadum Hodges na-eche banyere ndị agha anyị na ọ na-egosi. Oge ndị agha yiri ka ha kwenyere, na-ahọpụta Mahadum Hodges dị ka otu n'ime kọleji 134 iji mee ndepụta Best For Vets maka 2020. Na mgbakwunye, nke a bụ afọ nke atọ anyị ịnata ugwu a dị ebube.
Gịnị Mere Hodges Kasị Mma Maka Vets?
Anyị na-enye raara onwe ya nye Dr. Peter Thomas Veterans Services Centers na Naples na Fort Myers campuses nke ndị agha ochie, maka ndị agha ochie.
Mmemme mmemme anyị na-elekwasị anya na ọrụ nke ọtụtụ ndị agha ochie chọrọ ịchụso.
Anyị na-ewepụta ụbọchị mmalite nke ọnwa ọ bụla ga-agbaso usoro iheomume nke ndị agha ochie.
Nanị ebe ndị a na-adọba ụgbọala ewepụtara maka ndị agha anyị na klas ọ bụla.
Iji gụkwuo ihe kpatara Hodges U kacha mma maka anụ ọhịa, gụọ isiokwu niile na Ugwu Florida kwa izu.
Mahadum Hodges, nke a kwadoro na mpaghara, nke ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ na-akwadoghị na 1990, na-akwadebe ụmụ akwụkwọ ka ha nwee ike ịmụtakwu agụmakwụkwọ ka elu maka mbọ onwe ha, nke ọkachamara na nke obodo. Ebe ụmụ akwụkwọ 10,000 gụsịrị akwụkwọ na-enwe pacenti iri itoolu na ịga nke ọma n'ọrụ a, a ghọtara Hodges maka mmemme na-emepe emepe nke ahaziri iche ma nyefee iji jeere ọtụtụ ndị na-amụ akwụkwọ okenye. Site na campuses na Naples na Fort Myers, Florida, Hodges na-enye ụbọchị mgbanwe, mgbede, yana klaasị n'ịntanetị nke ngalaba klaasị ụwa kụziri maka ogo mmụta na gụsịrị akwụkwọ. A họpụtara Hodges ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ Hispaniki Na-eje Ozi, ọ bụkwa onye otu Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU). Enwetakwu ihe omuma banyere Mahadum Hodges dị na Hodges.edu.
Tags: kọleji kacha mma maka ndị agha ochie, UduU, Kọleji ndị agha, Lọ akwụkwọ mahadum